Kooxda Sicilian Opera Choir: Sababta Ugu Filan Booqashada Talyaaniga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Kooxda Sicilian Opera Choir: Sababta Ugu Filan Booqashada Talyaaniga
The Opera Sicilian Hobolada Italy, oo ku guuleystey Abaalmarinta Caalamiga ah ee Opera ee 2017, waa xaqiiqo dhab ah oo lafteeda ku dhistey muusikada, tiyaatarka, opera, iyo muuqaalka heesta sanadihii la soo dhaafey.
Daryeelka gaarka ah ee codka iyo dhadhanka iyo sidoo kale kala duwanaanta qaybaha dabiiciga ah, waxay u oggolaaneysaa koox-kooxeedku inuu la kulmo labadaba shaashadda iyo dalabyada muusikada iyo muqaddaska leh oo ay la socdaan ururinta heesaha dhaqameed ee adag.
Waxay ka kooban yihiin fanaaniinta koox-kooxeedka oo ka kala yimid daafaha Sicily, Kooxda Sicilian Opera Choir waxay qabataa riwaayado, riwaayado, iyo riwaayado leh guul wanaagsan oo dadweyne iyo mid xasaasi ah waxayna si joogto ah uga diiwaangashan tahay tiyaatarada heer qaran iyo heer caalami ah. Waxqabadka heesaha culus waxaa lagu daray dhaqanka taas oo ka dhigaysa shaqo xoog leh oo cilmi baaris ah, xoojin, iyo dhoofinta farshaxanka Sicilia ah oo laga sameeyay gudaha dalka iyo wixii ka baxsan iyo sidoo kale dib u helista qorayaasha ugu muhiimsan ee Sicilian iyadoo la fulinayo shaqooyin aan caan ahayn. iyo shaqooyin aan la daabicin oo ay sameeyeen P. Mandanici, P. Vinci, G. Pacini, V. Moscuzza, FP Neglia, A. Pepoli (shaqadii “Mercedes” ee lagu qabtay adduunka), V. Bellini (gaar ahaan “Zaira” oo leh waxyaabo aan caadi ahayn kaqeybqaadashada tarjumaano ka mid ah dadkii asalka u ahaa bandhigii aduunka ee 1976, iyo shaqooyin muqadas ah ee xilligii dhalinyarada Bellini: Leyliyeyaasha xoola dhaqatada ee Virgin; Tantum ergo iyo waalidiinta, iwm) Di Zaira wuxuu tifaftiray nooca filolojiga ee "Bellini Festival" oo lagu soo bandhigay Catania tiyaatarka Romanka ee Greek bishii Sebtember 2012.
Madaxweynaha, Alberto Munafo, waxaa lagu abaalmariyay, iyo kuwo kale, abaalmarinta caalamiga ah ee Sicily "Il Paladino" munaasabadda sanad-guuradii afaraad, Belliniano Prize 2015, Abaalmarinta Akadeemiyada Farshaxanka Farshaxanka ee Catania, Safiirka Belcanto Prize 2016 , iyo 2017 waxaa lagu siiyay Shiinaha abaalmarinta Caalamiga ah ee Opera - Oscar della Lirica - intii lagu guda jiray dhacdo uu baahiyay telefishanka dowladda Shiinaha horteeda bilyan iyo bar daawadayaal ah.
Wuxuu la shaqeeyay, iyo kuwo kale, Masraxa Vincenzo Bellini Tiyaatarka (Catania), Tiyaatarka Dawladda Hoose ee Bologna, Sicilian Symphony Orchestra, Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Macao - Shiinaha, Bandhigga Opera ee Shiinaha (Tianjin, Harbin, Xiamen, Canton, Nanjing, iwm.), Orchestra national d'Île de France, iwm., Berrinka muusikada muqaddaska leh ee Toddobaadka Caalamiga ah ee Muusikada Muqaddaska ah ee Monreale (Plermo).
Wuxuu kaqaybqaatay dhacdooyin dhowr ah oo ay baahiyeen BBC iyo RAI adduunka oo dhan. Wuxuu ahaa halyeeyga shaqooyinka si toos ah looga sii daayo Tiyaatarka Qadiimiga ah ee Taormina adduunka oo idil iyadoo loo marayo marinnada RAI (RAIUNO iyo Rai5), SKY, iyo wareegga Microcinema ee inka badan 700 shineemo.
Wuxuu iskaashi la sameeyay, kuwo kale, Joseè Carreras, Daniela Dessi, Fabio Armiliato, Gregory Kunde, Marcello Giordani, Steven Mercurio, Giuliano Carella, Luciana Serra, Lucia Aliberti, Fiorenza Cossotto, Liu Jia, Marius Stravinsky, Choir of Sistine Chapel, Donato Renzetti, Franco Zeffirelli, Grisha Asagaroff, Ralf Weikert, iyo Andrea Bocelli.
Sannadkii 2017, wuxuu daahfuray Harbin Opera House oo ku yaal Shiinaha xaflad lagu maamuusayo Sannadka Cusub oo ay si gaar ah uga qaybgaleen mulkiile José Carreras.
Tiyaataro tiro badan oo opera ah ayaa laga furay dunida Aasiya: sanadkii 2018 waxaa laga furay Tiyaatarka Nanjing, Tiyaatarka Fonshan, iyo Masraxa Anshan.
Laga soo bilaabo 2019, waxay abaabushay Festival dei Teari di Pietra kaas oo mideeya 3-da tiyaatar ee ugu waa weyn Sicilian: tiyaatarka qadiimiga ah ee Taormina, masraxa Griiga ee Syracuse, iyo tiyaatarka Griiga ee Tindari oo ka bilaabanayay III ilaa IV BC.
Laga soo bilaabo 2018, waxay sidoo kale abaabushay Abaalmarinta Caalamiga ah ee Giuseppe di Stefano oo la siiyo farshaxanno muhiim ah oo ka tirsan goobta caalamiga ah ee opera (kuwa kale waxaa ka mid ah Cecilia Gasdia, Jessica Pratt, Nicola Martinucci, Giovanna Casolla, iwm).
Abaalmarino qaali ah iyo abaalmarino, kafaalaqaadyo ka yimaada xafiisyada ugu sareeya gobolka, iyo wadashaqeyn lala yeesho qaar ka mid ah hagayaasha ugu muhiimsan, agaasimayaasha, iyo fanaaniinta ku sugan goobta adduunka, ayaa ah qaar ka mid ah ujeeddooyinka lagu gaadhay hada waxa loo arkaa mid ka mid ah kooxaha caanka ah ee caanka ah. meydadka heer caalami, waana safiirka dhaqanka talyaaniga iyo yurub iyo halbeeg xambaarsan hidaha faneed ee wadankan quruxda badan iyo laxanka weligiis ee aduunka ee Bellini.
Ruqsadda Weriyenimo ee rasmiga ah ee Mario waxaa leh “Amarka Qaranka ee Saxafiyiinta Rome, Talyaaniga 1977.